En vente actuellement 15/10/2018
Manala « points noirs » aminny voatabia
Manimba ny hatsaran-tarehy ireny teboka mainty kely miparitaka eny aminny hodi-tava ireny. Misy olana kely ny hoditra matoa misy azy ireny, ka mila koloina. Ity maska atolotra anao ity dia manampy hanala ireny points noirs ireny mora foana.
Ireo aretina mety ho azo rehefa manoroka
Aretina tsy voaresaka matetika saingy ilaina ho fantarina ny « maladie du baiser ». Rehefa dinihina tokoa mantsy dia maro ireo aretina azo vokatry ny fifanorohana. Mila fitandremana, araka izany, indrindra rehefa marary.
Ireo vehivavy malaza notoloranny vadiny fanomezana lafo vidy be
Tsy nofinofy na any anaty horonan-tsary ihany akory no misy lehilahy manolotra fanomezana tsy taka-bidy na tsy eritreretinny saina, aminny olon-tiany.
Inefatra raiki-pitia ny olona, eo aminny fiainana
Indray mandeha ao anatinny fiainana ihany, hono, no mety ho tojo ilay sila-panahy ny olona iray. Toa mahakivy ihany izany, saingy manome fanantenana kely anireo efa niaraka taminolona, saingy mbola tsy nahita anilay tiany, ity voka-pikarohana iray ity.
Akoho aminny sakamalao
Akora ilaina · Akoho lehibe 1 · Tongolo be 1 · Tongolo gasy hasiny 1 lehibe · Voasarimakirana 1 · Sakamalao efa voakiky 2sf · Siramamy na tantely 1 sf · Saosy soja 2 sf · Tongolo maitso · Persily sy dità (thym) · Kotomila kely · Menaka · Vinaingitra 2 sl (tsy voatery asiana) · Paty tagliatelle
« Rideaux » : maneho ny toetranny tompon-trano
Tianao hiova endrika kely ny efitra tsirairay ao an-tokantrano. Azo atao tsara izany, aminny alalanireo rideaux. Ovaina ny akora sy ny lokony. Tsara ho fantatra fa maneho ny toetranny tompon-trano ny lokonny rideaux.
Nohaninny alikany ny vihiny sy ny filahiany
Tovolahy iray 22 taona no naiditra hôpitaly haingana, sy tsy nahatsiaro tena rehefa nokaikerinny alikany.
Hitady mpiasa vahiny hiasa any an-toerana ny Japoney, fa tsy maharaka
Mitady tera-tany vahiny hiasa any aminy ny fitondram-panjakana japoney. Tsy ampy mihitsy mantsy ny olona hiasa ao aminny sehatra sasany toy ny sehatry ny fambolena, ny fivarotana, ny fanamboaran-trano,
Washington : ho foanana ny fanamelohana ho faty manomboka izao
Ny alakamisy teo no nanambara ny fitsarana avo ao Washington fa mifanohitra aminny lalam-panorenana ny fanamelohana ho faty. Manomboka izao dia voarara izany sazy izany ao an-toerana.
Vehivavy be adin-tsaina : tandremo fa mamparefo ny vatana
Toetra voajanahary ao anatinny vehivavy ny mizara ny olany ka mora kokoa ho azy ny mizaka ny adin-tsainy. Na eo aza anefa izany dia misy fetrany izay hamafinny sainy izay ka mety hiteraka voka-dratsy ho anny vatana rehefa tena tsy zaka intsony.
Niaraka taminolona nandritra ny 4 taona aho.
Tsy nahatsapa olana mihitsy aho nandritra izany, fa toa nifankatia be izahay. Vao haingana anefa no fantatro fa manambady izy ary izy koa nilaza tamiko fa tsy tia ahy akory fa ny volako no niarahany tamiko.
Avoine no atao sakafo maraina, raha te hihena
Ny sakafo maraina no sakafo lehibe indrindra ao anatinny tontolo androary efa voamarinireo imatihanina momba ny fomba fisakafo, na ny nutritionnistes izany.
Le bonheur est le meilleur des cosmétiques. (Bobbi Brown)
Miara-mahatsikaritra daholo angamba isika fa rehefa tezitra, na malahelo, dia tsy mihiratra mihitsy ny endrika.